ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ငွေရတုအခမ်းအနားကို မန္တလေးနှင့် နယ်ဒေသများတွင်ပါ ကျင်းပ (ရုပ်သံ)
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ငွေရတုအခမ်းအနားကို မန္တလေးနှင့် နယ်ဒေသများတွင်ပါ ကျင်းပ (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:45 PM
၈၈ အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ခဲ.ပြီး ယနေ့ရှင်သန်နေသူတွေက
ဘဲ သူရဲကောင်းတွေလား ?
ဒါဆို ၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ.ပြီး အသက်ပေးဆပ်ခဲ.ရသူတွေ
ကိုလည်း မော်ကွန်း မတင်ကြတော.ဘူးလား ၊
မြို.အလိုက် ၊ နယ်အလိုက်
မှတ်တမ်းမှတ်ရာ မော်ကွန်းတော. ထိုးသင်.ပါတယ် ၊
ယနေ.ခောတ်လူငယ်တွေက ၈၈ မှာ
ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးတာ လောက်ဘဲ အမည်နာမနဲ. သိကြတော.ပေမယ်.
ပြုတာလောက်ကိုတော. လုပ်ကြစေချင်တယ် ။
၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ.ပြီး အသက်ပေးဆပ်ခဲ.ရသူတွေ
Peace Forever said...
ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ 8888 ငွေရတု ရောက်ခဲ့ပြီ..
တပ်မတော်မှ ပြည်သူလူထု နှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ အပေါ် (စစ်ရက် စစ်လ စစ်ဆက်စစ်) ထာဝရ ချုပ်ငြိမ်းပါစေသောဝ်..